अमिताभ, आमिर, हेमा मालिनी जस्ता ६० देशको हस्तीहरु बसेको मञ्चमा कसले लगायो आगो ? | सहारा टाइम्स
Home » samaj » अमिताभ, आमिर, हेमा मालिनी जस्ता ६० देशको हस्तीहरु बसेको मञ्चमा कसले लगायो आगो ?
अमिताभ, आमिर, हेमा मालिनी जस्ता ६० देशको हस्तीहरु बसेको मञ्चमा कसले लगायो आगो ?
मुम्बई एजेन्सी, फाल्गुन ३ गते । भारतको मुम्बईमा सुरु भएको ‘मेकइन इन्डिया विक’ कार्यक्रमको मुख्य स्टेजमा भिषण आगलागी भएको छ । कार्यक्रम भैरहेका बेला स्टेज जलेर ध्वस्त भएको हो ।
कार्यक्रममा बलिवुडका हस्तीहरु अमिताभ बच्चन, अमिर खान, हेमा मालिनी, महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री, गभर्नर, वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी लगाएत बिभिन्न ६० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिहरु दर्शक दीर्घामा बसिरहेका बेला स्टेज मुनिबाट आगो सुरु भएको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
एक हप्ता सम्म चल्ने भनिएको सो कार्यक्रममा सास्कृतिक कार्यक्रम अन्तर्गत नृत्य भैरहदा स्टेजको मुनि ठुलो आगो देखिए पछि स्थिति तनाव पूर्ण भएको बताइएको छ । हाल सम्म कोहि हताहत नभए पनि सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रम भएकाले यो घटना कसरि भयो भन्ने बिषयमा प्रश्न उठेको भारती समाचार सस्था जी न्युजले उल्लेख गरेको छ । अहिले आगो नियन्त्रणमा आइसकेको बताइएको छ ।
भारत सरकारले भारतमा रोजगार बढाउन र महगा बस्तुको आयात घटाउन भारतलाई उत्पादनको हब बनाउने उद्देश्यले सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उदघाटन गरेका थिए । (एजेन्सीको सहयोगमा)